Iskindir Naggaa dabalatee hidhamtoonni 746 gadhiifamuufi - BBC News Afaan Oromoo
Iskindir Naggaa dabalatee hidhamtoonni 746 gadhiifamuufi
Goodayyaa suuraa Eskindir Naggaa fi Andu'alem Arraagee hidha gadhiifamuuf jedhu
Motummaan Itoophiyaa haaluma hidhamtoota siyaasaa gadi dhiisuuf waadaa gale tureen, pirezidaantii ittaanaan Paartii mormituu Tokkummaan Dimokraasiifi Haqaaf Obbo Andu'aalam Araageefi gaazexessaa Iskindirri Naggaa dhifamaan akka gadhiifaman murtaaa'u himame.
Dhaabbanni midiyaa Faanaa Birodkaasti Korporeeti akka gabaaseetti, namoota kanneen dabalateee shakamtoonniifi sirreefamtoonni 746 himannaan isaanii adda cituun akka gadhiifama murtaa'u gabaase.
Obbo Andu'aalam erga hidhamaniin booda baatii Fulbaana 3 bara 2004 akka shororkkeessatti shakamuun hidhame booda hidhaan umurii gutuu itti murtaa'unsaa ni yaadatama.
Haaluma walfakkaatunis gaazexessaa Iskindir Nagaas hidhaa waggaa 18 itti murtaa'ee xumuruuf mana hidhaa keessa kan ture ta'uun barameera.
Iskindir osoo hidhaarra jiruu ALA bara 2012 fi bara 2017tti bahaasawwan addhunyaa garaa garaa badhaasamee jira.
Namoonni kunneen lamaanu yakka ittiin himataman kan hinfudhannee yo ta'u, dhaabbilee idil addunyaa waa'ee mirga namoomaatiif mormanis hidhaan isaanii kan siyaasaan kakaafameedha jechuu qeeqaa turan.
Dhaabbanni idli addhunyaa Amansitii Intarnaashinaal, ammoo ''hidhamtoonni qor-qalbii hundumtuu haal-duree tokko malee attatamaan gadhiifamuun, dhiibbaa dhabiinsa haqaa irratti raawwatameef beenyaa argachu qabaatu'' jedha.
Dhaabbatichatti Daarektarri Ittaantuun naannaw Baha, gaanfaafi Haroowwan gurguddoo Afriikaa, Saaraah Jaaksan yaada ibsa kanarratti kennaniin, tarkaanffii Iskindir Nagaa fa'i kunis bilisummaa hidhamtoota siyaasaa hafan hundaatti geessuu qabaata jedhu. ''Gaazexessaan kun hidhaa waaggotaa torbaatiin booda bilisummaan deemuuf dhagahuun baayyee gammachisaadha.''
Kana boodas guyyaa tokkolleen duubatti dhiisu hinqabaatu, jedhaniiru.
''Garuu addunyaanis waa'ee namoota kumaatama ammas sababii siyaasaatiin mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii dagachu hinqabaatu. Namoota shororkeessummaan siyaasaan kakaafameen himatamuun mana hidhaatti argaman keessaa Baqalaa Garbaa, Addisuu Bulaalaa fi Wubishat Taayee ni argamu.''